Wadanka myanmar oo ciidamadu Inqilaabeen – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Wadanka myanmar oo ciidamadu Inqilaabeen
Wadanka myanmar oo ciidamadu Inqilaabeen
Wararka ka imanaya dalka Myanmar oo hore loo oran jirey Burma ayaa sheegaya in ciidamada Milatariga dalkaasi ay la wareegeen talada dalkaas.
Sarkaal u hadlay Milatari ayaa sheegay in ciidamada ay xukunka hayn doonaan muddo sanad ah. Hoggaamiyaha Xisbiga haya talada dalka Myanmar ee National League for Democracy (NLD) Aung San Suu Kyi, ayaa Xabsiga la dhigay, sida uu sheegay afhayeen u hadlay Xisbiga.
Afhayeenka xisbiga NLD, Myo Nyunt, ayaa wakaaladda wararka ee Reuters khadka telefoonka ugu sheegay, in Ms Suu Kyi, Madaxweyne Win Myint iyo hogaamiyeyaal kale la qabtay, aroornimadii hore ee Saaka.
Afgambigan ayaa yimid kadib muran ka dhashay doorashadii ka dhacday dalka Myanmar bishii November ee sanadkii hore.
Hoggaamiyaha Saaka Xabsiga la dhigay ee dalkaasi mudada badan maamulaysay ayaa lagu eedeeyay dambiyo waa weyn oo ay kamid tahay xasuuqa dadka Muslimiinta Rohingya Iyo barakicinta ay ku lug leedahay Haweenaydan haysata Bilada Nabadda adduunka.
Previous articleMadaxwaynihii deegaanka Tigreega Dr. Debretsion Gebremichael oo hadley
Next articleSheeko La Yaab Leh Oo Ka Dhacday Gudaha Xabsiyada Jarmalka!
Horjooge Al-Shabaab u qaabilsanaa qaraxyada oo lagu qabtay Gobolka Gaalgaduud
R/wasaare Kheyre oo sheegay in muddo labo bil ah lagu soo...